Rava ve ny Cookie Google? | Martech Zone
Manana an'ity teoria ity aho fa tsy misy zavatra azo ovaina tsy hita fetra. Ireo orinasa mahomby dia matetika mihoatra ny fahaizany mitantana ny fitomboana, ireo teknolojia izay miasa amin'ny sehatra kely dia kely dia mahalana no manao ilay asa amin'ny ambaratonga lehibe… na ny mpiasa aza dia matetika no avoaka mihoatra ny fahaizany.
Google nahita fitomboana mbola tsy nisy toa azy tao anatin'ny folo taona lasa. Nandritra ny fotoana kelikely dia notazoninay izy ireo ary nampiasainay ho fikajiana fahombiazana. Omaly, nampidina ny bar izahay, nanomboka nanadihady tany ivelan'ny rindrinay ary nibanjina kokoa an'i Google rehefa nisy zavatra tsy nahazatra.
Google vao tsy nahomby:
Androany aho haneho hevitra ao amin'ny bilaogin'i Erik namako Bilaogera (Lehilahy manafika sakaiza miaraka amin'ny cheeseburger), saingy tsy azoko natao ny namoaka ny pejy fanehoan-kevitra.
Nandritra ny roa andro dia tsy afaka nisoratra anarana tamina tranonkala izahay Google Search Console. Ny tranokala dia nanohy nanome anay lesoka fanamarinana fa mamerina kaody tsy marina amin'ny pejy 404 izahay (pejy tsy hita). Raha ny marina, ny sehatra bilaogy orinasa namerina ireo kaody sahaza azy. Andro iray na taty aoriana dia salama tsara daholo!
Google Reader toa izany foana manodina amiko, mampiseho amiko ireo fahana izay efa novakiako… hatrany hatrany hatrany.
Nampiharinay a Google Analytics kaonty ho an'ny mpanjifa tamin'ity herinandro ity izay naneho ny tranokala dia voamarina tamin'ny pejy iray, tsy voamarina tamin'ny pejy iray hafa, ary tsy nandray naoty. Tsy maintsy mamafa ny kaonty izahay ary manomboka indray.
Fanavaozana: 12/21 - Hatramin'ny namadihana ny fahana nataoko tamin'i Google dia tsy afaka niditra aho ary tsy nahazo fanavaozana ny statiko sy ny adiresiko fahana taloha.
Ny hany zavatra toa tsy ahombiazan'ny Google dia ny fampirantiana dokam-barotra mifandraika amin'izany. Hmmmm.
Tags: tahan'ny add-to-cart amin'ny findayfinday sdkschmapSliderStarbucksfampiharana finday starbucksJereo izany Now Entertainment
Dec 19, 2008 ao amin'ny 6: PM PM
Mahafaly ny mahafantatra fa mbola tsy nahavita nandefa doka taminay i Google. Azoko tsara ny sasany amin'ireo serivisy maimaimpoana nidina indraindray, fa ny mampatahotra ahy dia rehefa manomboka milatsaka mandritra ny ora maro na andro maromaro ny fampiharana "kilasy fandraharahana" (mailaka nampiantranoina, fampiharana sns). Tsy misy resaka ny antony na oviana no hiverenan'izy ireo. Fotoana very io, izay midika hoe very vola amin'ny asako. Ny tena vola heveriko fa tsy mitantana ny entako manokana.
Dec 22, 2008 amin'ny 11: 56 AM
Niaina olana vitsivitsy niaraka tamin'ny bilaogiko koa aho. Tsy lazaina intsony, mandeha moka ny Google Alerts. Faly mahafantatra fa tsy izaho irery no mahatsikaritra an'io!